Elementary Icon Rongedza muGNOME | Kubva kuLinux
Elementary Icon Rongedza muGNOME
sanhuesoft | | Chitarisiko / Kuita munhu
When Ubuntu akatanga kushandisa kubatana seye default desktop, ndakafunga kuisa GNOME kubva kuPPA yako. Saka chinhu chekutanga chandakaita chaive chekutarisa icon pack yaive yakanyanya kuenderana nemaitiro angu. Panguva iyoyo ndipo pandakasangana Elementary Mifananidzo: pack ine ma icon ayo anonakidza kwazvo kutarisa.
Ipapo ini ndakaenda ku Arch Linux uye chimwe chezvinhu zvekutanga zvandakaita kudhawunirodha iyo imwechete icon kurongedza uye kuiisa pane system. Kuti uite izvi, zvakafanira kurodha pasi kubva kuDeviantArt, teedzera iyo mufaira yandinozoratidza gare gare uye pakupedzisira kushandisa gnome-tweak-chishandiso, iise sechinyorwa chemusoro.
Dhawunirodha pasuru Elementary Mifananidzo kubva kuDeviantArt nekutevera iyi link.
Unzip iyo uchishandisa yako yaunofarira compression / decompression chishandiso. Ini ndaishandisa iyo File Manager (file-roller).
Kana iwe uri muArch iwe unogona kuiisa uchishandisa unotevera kuraira.
sudo pacman -S faira-roller
Mumba mako gadzira dhairekitori .icons. Unogona kuzviita uchishandisa unotevera kuraira, kana iwe uri kumba:
Kopa iyo isina kuvhurika icon theme dhairekita kune ino dhairekitori.
Kuti uite theme iwe unoda iyo GNOME Tweak Tool, inozivikanwawo seTweak Tool, iyo iwe yaunogona kuisa nemirairo inotevera (pane Arch Linux):
sudo pacman -S gnome-tweak-chishandiso
Wobva wamhanya chishandiso ichi nekuchitsvaga mukati meGNOME kunyorera runyorwa kana nekumhanya mukonioni:
Muchikamu chekuruboshwe sarudza "Musoro" uye mukati, mu "Icon theme" sarudzo chiratidzo "Elementary".
Nezvo isu tatova nemusoro wenyaya Elementary yakatumirwa padhesiki redu GNOME. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyi nzira inofanirwa kushanda kuisa chero yakafanana icon pack, iyo iwe yaunogona kuwana mukati deviantART.
Ndinovimba chidimbu chidiki ichi chakashanda kwauri. Semazuva ese, kana iwe uine chero mibvunzo, makomendi kana mazano, ini ndinokumirira iwe mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Elementary Icon Rongedza muGNOME
Iyo AUR yekutanga-mifananidzo package haishande kwauri? MuXFCE, nekuisa iyo package, unogona kusarudza yekutanga muchirongwa chekumisikidza.
Pindura kuna James
Iyo imwe nzira yekumisikidza yeiyo yekutanga pack kune avo vasingade kushandisa iyo AUR. MuGNOME iwe uchafanirwa kushandisa gnome-tweak-chishandiso zvakadaro kuti uisarudze semusoro wenyaya. Zvekutenda nekutenda nekupindura.
Aha, ndanga ndichizvitaura kuitira kuti iwe usazive pasuru yacho, nekuti iwe unotaura kuti kuisa Gnome paUbuntu wakaenda kuPPA pane kurodha pasi masosi uye zvichingodaro.
Kana zviri zvimwe zvirongwa, chero munhu anoda kushandisa ino icon theme, ini ndinokurudzira kushandisa mapakeji anowanikwa mune repos (kana iyo AUR mune ino kesi) pane kuisa manyore zvinhu. Minimum nekuti aya mapakeji anowanzo chengetwa uye kana paine nyowani nyowani kuvhura packer kana yaourt kana mumwe maneja ane rutsigiro rweAUR zvaitwa, zvikasadaro zvakafanira kudzokorora mashandiro mashandiro.
Kana ndiine mvumo yemupepeti (kana ndikagara kana "maapplication" akavhurika) ini ndichawedzera imwe nzira kuburikidza neAUR kune avo vanoshandisa yaourt. Zvekutenda nekutenda nekupindura.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, zvakadaro, iyi package haina kuvandudzwa izvo kazhinji, saka hazvisi soooo zvakafanira kuti uve nemukana wekuvandudza, kunyangwe zvichingogara zvakanaka
Linuxeros ine chili mudhongi muna 3,2,1 ...
shanduko ichauya inobatsira.
Haha, murume, hazvina kudaro, handiti?
Chinhu chemusika chinogovana chokwadi, ini handizive kuti kusvika papi Linux pane desktop PCs inoshanda nemazvo (kune vakajairika vashandisi, inoshanda kwandiri); Ndichiri kufunga kuti zvinotora basa rakawanda kupa zvinhu zvinoshanda, nguva, pasina kugadzirisa shit nekuti mumwe munhu haana kuita basa ravo nemazvo (uye ini ndinoshandisa Arch asi ini ndinotaura nezve Ubuntu, Fedora, nezvimwe muArch zvimwe). Muzhinji, QA iri kushomeka muma distros mumaonero angu (kunyanya zvakare, iwe unofanirwa kudzidza maitiro ekuita devs zvinhu nemazvo, kana ivo vanoitwa nemazvo uye vasina kuitwa: D).
Chinhu chemubhadharo ... ndinopokana ipapo, tarisa Linux uye ayo madhiri, kunyangwe hazvo vari mahara, vazhinji vacho vane kumashure kwemakambani anorarama kubva kutsigiro yavanopa kune wechitatu mapato; Uye makore makumi maviri makore mazhinji huh! (Kunze kweWindows 20 ndinofunga yanga yave yegore kana zvakadaro).
Uye chii chevashandisi vanogutsikana ... ui ui ui, pachave nechinhu icho: D. Windows 8 yakagamuchira kushoropodzwa kwakawanda nekuda kwekushandurwa kweiyo interface uye nevamwe, vanhu vasina mufaro varipo (uye paive) nefoshoro point. Zvakare nemabatiro avanga vakaita (Windows XP -> Windows 7 yaona _great_ kuvandudzika mukugadzikana uye kuchengetedzeka, handicharangariri mabhuruu ebhuruu kana mavhairasi akakanganisa iyo system yese) ivo vanoenda voipurudzira pamwe nevamwe vatyairi vakapusa (* coff * Wireless kubva kuIntel * coff *) ichisiya vashandisi avo a priori vanogona kugutsikana nehurongwa mune shit nekuti mabhora avo azvimba.
Shit ... chirevo chacho yaive mhinduro kuWindowsero ...
Ini ndinofunga kazhinji GNU / Linux inoshoropodzwa nekuda kwekuparadzira kwakawanda senge Ubuntu Zviripachena kuti Windows ichave nemugove mukuru wemusika kana vakumanikidza paunotenga kabhuku kana komputa.
Hongu, hongu, ndezvekuti tsika itsika uye kana vanhu vakaenda kunotenga komputa nyowani muzvitoro zvikuru, chavanowana maPC ane pre-akaisirwa Windows.
Pachezvangu, vazhinji vevanhu vandinoziva havazive kuti Linux iri nezvei uye havafarire kuziva, vamwe vanodavira kuti yakaoma zvikuru, vamwe vanoti "inoyamwa" nekuti havagone kutamba mitambo kana kuva neTunes, nezvimwe. Kana zvirizvo zvakawanda zvavo zvezvavanoita nemashini avo, chero sisitimu iyo inokwanisa kuwana iyo Internet uye mauri maunogona kuona mavhidhiyo (zvinokwana) zvakaringana.
Uye izvo zviri pasina kuisa nyaya dzepfungwa munzira ... kana ukatanga kutaura nezverusununguko, vamwe vachatotarisa kwauri nechiso chisingazivikanwe: D. Iko rusununguko hongu, asi sezvo iwe uchida kushandura chimwe chinhu muchirongwa, zvisinei kuti une kodhi yekodhi yakawanda sei, unogona kuvaona vachiita chero chaunoda.
Uye isu tinobva pamusoro wenyaya: D! Iyo icon pack yakanaka kwazvo, pane dzimwe nguva apo ini ndanga ndisingafarire zvidhori zvefaira uye nevamwe vandinofunga kuti ndinorangarira, asi izvozvi ndiwo musoro wandinoshandisa.
Faience haina kushata kana asi ... pane chimwe chinhu chiripo chisingandibvumidze, pamwe kuti hapana sarudzo dzekusarudzika kusarudza mamaki emamiriro erima kana akareruka masisitimu, kana iyo kirabhu isingafunge nezve kugona us.
Pandakapinda muUniversity ndakatanga kushandisa GNU / Linux zvakare, nekuti ndisati ndamboshandisa Windows 7 kwerinenge gore rimwe chete. Shamwari dzangu dzakanditarisa senge weirdo, nekuti vaisanzwisisa kuti komputa yaigona kushanda isina Windows . Saka ndakabvunza imwe yeshamwari dzangu dzepedyo kuti aishandisirei komputa, uye akandinongedzera kuti unotaura zvakadii kuti kusecha internet, imwe yekutanga hofisi michina uye yakakosha multimedia (kuteerera mimhanzi, kutarisa mavhidhiyo, nezvimwewo). Kwemazuva iwawo aikundwa neWindows nekuti yainonoka uye aive nehasha zhinji naye.
Ndakamupa kuti ayedze Ubuntu, iyo yaive intuitive uye yakanaka kugovera kutangisa munyika yeGNU / Linux, uye kuti kana aine chero mibvunzo aive neni kuti ndipedze matambudziko ake. Ipfupi nyaya, nhasi haugone kufara nebookbook rako, rinoshanda zvinoshamisa (kunyangwe iine ATI) uye inogona kuita zvese zvayaimboita muWindows asi isina matambudziko akawanda. Aya ndiwo maratidziro andakaita kwaari kuti GNU / LInux yakanga isiri chinhu kubva kune imwe nyika uye kuti chero munhu ane chishuwo anogona kuishandisa.
Vashoma kwazvo vanonzwisisa rusununguko, ini ndinozviona seyakanaka kwazvo nekuti kunyangwe hazvo kazhinji kacho isina ruzivo nemitauro yese, kune nzanga huru inoongorora makodhi enzvimbo kuti zvirongwa zvisatyora rusununguko urwu.
Ini ndinonyatsoda theme, ndakapedza nguva yakanaka ndichishandisa Faenza uyezve Faience, asi ini ndakazopedzisira ndavhiringidza iyo monotonous fomati ine yakachena mativi mifananidzo. Elementary ndiyo yese yandinogona kukumbira, zvirinani muGNOME-Shell zvakanaka.
Kwaziso kubva kuChile mudiwa wangu!
Nzira yekuwedzera sei ruvara kuPacman Package Manager
Shandisa akati wandei waConky panguva imwe chete